Barcelona Negra 2017. Kuvhara kwemutambo. Tinoongorora. | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Zviitiko, Noticias, Nhema nhema
Barcelona Negra 2017. Vamwe vanyori.
Nhasi 4 yeFebruary, iyo yegumi nembiri edition yeBarcelona Nhema Novel Mutambo inovhara. Yakatanga muna Ndira 26 uye yanga izere nezviitiko, mitero uye nhau. Uye zvechokwadi pakave nekushanyirwa kubva kune anozivikanwa mazita eiyo genre ayo ari kuwedzera kuve akakosha, mupenyu uye aine huremu hwakawanda mumabhuku.
Zvichida nhau dzakakosha kwazvo dzave kugumiswa kwaPaco Camarasa munzvimbo yake semuchengeti wemutambo. Mutengesi webhuku ane mukurumbira weMutema uye tsotsi, mutsoropodzi uye mutsigiri werima ngano muSpain anotiza kubva kumberi kwemoto. Asi kwave kune zvimwe zvakawanda. Tinozvipfupisa.
2 Pepe Carvalho Mubayiro
3 Vamwe vanyori
Mutambo, uye senguva dzose, yakatanga muna Ndira 26 nekutakura kwe VIII mubairo Ink Crims, chirevo cheiyo nhema mhosva yechiCatalan. Uye zuva rakatevera raJaume Fuster Raibhurari yakavhura iyo chiratidziro «Pepe Carvalho», nemabasa akagadzirwa kubva mumanovel e Manuel Vazquez Montalban.
Chaizvoizvo iyo Mutero unonyanya kukosha wave kuVázquez Montalbán, iyo yakaitwa musi waFebruary 1. Iyo 40 anniversary yechinyorwa che Kusurukirwa kwemaneja, nemutikitivha wake ane mukurumbira Pepe Carvalho.
Uye dzimwe nhau dzakakodzera dzakanangana naCarvalho yave iri iyo chiziviso chekudzoka kwake kuvonga munyori Carlos Zanon. Akanga achangobva kuzivisa pachena chinangwa chake ku enderera zvakateedzana muna 2018. Muchengeti kamera Zviratidzwa zvirokwazvo nezvazvo, asi zvakavepo maonero ezvese zvido. Ivo vakawanda mukuda kuona gamba ravo richirova zvekare mumigwagwa yeBarcelona sezvo vari kupokana nekubata bvudzi zvakare kana risiri iro ruoko rwemunyori waro.
Uye paiva nemutero wechipiri, uyo wakapihwa kuna Gijon Nhema Svondo, mumwe mutambo unosvitsa makore makumi matatu ekuberekwa. Musiki waro akauya, Paco Ignacio Taibo II.
Pepe Carvalho Mubayiro
Inofungidzirwa chiito chepakati chemutambo, wakapihwa zuva rekupedzisira 2 kusvika Dennis Lehane. Iye munyori weAmerican wekuIrish mavambo anogona izwi rinonyanya kukosha jenda munyika yako izvozvi. Munyori wenyaya chaiyo yematsotsi, yakaoma uye yakatsanangurwa semurume, kwete maziso, ndiye nyanzvi mumufananidzo wakasviba weguta rake, Boston. Asi basa rake rinopfuura kupenya nemazita akadai anozivikanwa se Mystic River o shutter Island.
Kungoburitswa Nyika iyoyo yakanyangarika, iyo inovhara iyo trilogy chii chakatanga Chero rimwe zuva ndokuenderera mberi Rarama husiku. Iyo bhaisikopo vhezheni yechinyorwa chekupedzisira icho, inotungamirwa na uye nyeredzi Ben Affleck. Seye katsamba kangu ndinobheja mafans mazhinji e Joe achikosora, hunhu hukuru, vangadai vakada Affleck kuti angosara PASI peKamera.
Somuenzaniso, John Connolly. Iye Dubliner nababa vemutikitivha Charlie parker anga achitaura nemutori wenhau Juan Carlos Galindo, kubva Nyika, muraibhurari yeJaume Fuster. Uye icelandic Arnaldur Indridason yakaita X-ray yenyika dzekumadokero sezvinoonekwa kubva ku "chitsuwa chechando." Indridason inopedzisa kutsikisa Betty, iyo yava kusvika pano kunyangwe ichibva muna 2003.
VaFrance vanga variwo Olivier Norek. Uyu aimbova lieutenant wemapurisa ane mumusika Domino mhedzisiro, yakanakisa european novel mune yakapfuura mutambo Quais du Polar. Uye chiItaly chauyawo Saint Piazzese, ane nyaya yake Kuuraya mumunda we botanical yakaburitswa kekutanga muSpain mushure memakore makumi maviri. Munyori weSicilian akataura kuti ipapo "Vázquez Montalbán anga atove chirevo" kwaari.
Pakati pemazita emunyika akabuda pachena Lorenzo Silva kana Dolores Redondo, zvambotaurwa Carlos Zanon,Toni Chikomo kana Rosa Ribas, avo vakapinda muzviitiko zvakasiyana zvakagadzirirwa.
Uye mukushaikwa kwechiyero chepamutemo mushure mekuvharwa kwemutambo, handina mubvunzo kuti, kune rimwezve gore, rave rakabudirira. Dai zvave zvimwe zvakawanda, kubudirira uye makore. Zvese zviri zviviri Barcelona uye vanoda vevatema genre vacharamba vachikutendai.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Zviitiko » Barcelona Negra 2017. Kuvhara kwemutambo. Tinoongorora.